Tudor akasimuka, mucherechedzo weEngland | Absolut Kufamba
La Tudor Rose (dzimwe nguva inonzi Union yakasimuka kana kungoti Chirungu Rose) ndiyo nyika chiratidzo cheEngland kubvira kunopera kweMiddle Ages. Ruva iri rinotora zita raro kubva ku Tudor imba, imba yeumambo yakabatanidza dzimba dzakanaka dzeLancaster neYork.
En los tsika nhovo dzeEngland, rose iri rinoratidzika rakamiririrwa nemashanu machena machena (anomiririra Imba yeYork) uye mamwe mashanu matsvuku (eiyo yeLancaster). Zvisinei, munyika ye floristry, iyo Tudor rose iri pink, Hue inova mhedzisiro yemusanganiswa weiyo tsvuku rose uye nechena rose.
1 Kwenhoroondo mavambo
2 Tudor akasimuka: chiratidzo cheEngland
3 Ruva kure neEngland
Iyo Tudor yakasimuka ine simba rine simba rekufananidzira sezvo inomiririra kupera kwekufona Hondo yeRoses, kurwa nezvombo kwakatarisana nemhuri mbiri dzine simba kwazvo muEngland mukati mezana ramakore rechiXNUMX.
Hondo yakapera nekukunda kwaHenry weLancaster mu Hondo yeBosworth Munda (1485). Akakunda akazviti mambo nezita ra Henry VII, kunyangwe gore rakatevera akazotora semukadzi wake Elizabeth weYork, nekudaro kubatanidza mhuri dzese uye kugadzirisa kuyananiswa. Kuenzanisira kubatana uku kutsva mune chimwe chiratidzo, iwo maviri-mavara rose (gare gare pink rose) akagamuchirwa, ayo kubva panguva iyoyo zvichienda mberi anozozivikanwa saTudor rose kana mubatanidzwa rose.
Kunze kwenyaya iyi, chokwadi chechokwadi chinosimbisa kuti panguva yeropa reChirungu Hondo yeVanhu chete chiratidzo chemuchena mutsvuku chaivepo, chinoshandiswa neImba yeYork. Sezviri pachena, ruva dzvuku rakagamuchirwa mushure mekupera kwekukonana nechinangwa chega chekugadzira chiratidzo chitsva. Iyo yekuparadzira svikiro yenguva yekusimbisa iyo nyowani kubatana kwenyika uye kunama maronda ekare.
Iyo Tudor Rose, mhedzisiro yemubatanidzwa pakati pezviratidzo zveImba yeLancaster (tsvuku tsvuku) neImba yeYork (chena ruva).
Kubva ipapo, munhoroondo yese yeEngland iyo Tudor rose yakamiririrwa munzira dzakasiyana siyana. Dzimwe nguva se kaviri ruva, vamwe vane rimwe roses rakasimudzwa pane rimwe uye, kazhinji, seasina kuroora yakasanganiswa rose. Iyo inomiririrwa nerosi yakashongedzwa nekorona zvakare yakajairika, sechiratidzo cheumambo hweBritish hwakabatana.
Tudor akasimuka: chiratidzo cheEngland
Nhasi, iyo Tudor rose inoonekwa se chiratidzo chepamutemo cheEngland, asi chisiri cheUnited Kingdom. Muchokwadi, yega yenyika ina dzinoita nyika inoshandisa chiratidzo chayo. Scotland ine rukato, Wales leek e North Ireland iyo shamrock, inova zvakare chiratidzo cheRepublic yeIreland.
Iyo Tudor rose inowanikwa pachiratidzo chepamutemo cheVachengeti veiyo Shongwe yeLondon uye mutumbi wevarindi vaMambokadzi. Izvo zvakare zvakaonekwa kwemakore mazhinji pane kumashure kweiyo Makobiri makumi maviri emadhora. Ehe, iye zvakare sachigaro iwo jasi rezvombo zveUnited Kingdom and of the Dare Repamusorosoro kubva munyika ino.
Pamusoro peizvi, mafeni e Rugby ivo vanoziva kwazvo kuti mubatanidzwa wakasimuka uripo pahembe dzevatambi vechikwata chenyika cheEngland.
Vatambi vechirungu rugby timu, ine ruva pachifuva
Maguta mazhinji eChirungu nemadhorobha vanozvikudza vanopfeka iyo Chirungu Rose muzviratidzo zvemuno. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeye Sutton Coldfield, padhuze neBirmingham, iyo Henry VIII pachake akapa chinzvimbo cheCiudad Real. Iyo Tudor yakasimuka zvakare inowanikwa pajasi remaoko edhorobha reyunivhesiti re Oxford.
Saizvozvo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti irozi rinoshandiswa mune ese magwaro uye nzvimbo dzeiyo England hofisi yevashanyi (KushanyaEngland), Kunyange uine monochrome dhizaini.
Ruva kure neEngland
Asi zvakare mubatanidzwa wakakurumbira rose unoonekwa mune dzimwe nzvimbo kure neEngland. Semuenzaniso, dunhu nedunhu re Queens muNew York City, Anopfeka Tudor yakasimuka pamureza wayo uye chisimbiso chepamutemo. Zvakare mureza we Annapolis muMadganis, inoratidzira Tudor yakasimuka padivi pemuti weScotland, ese ari maviri akapfekedzwa korona.
Pasina kusiya United States, kune imwezve nhoroondo uye kwenzvimbo kuziva mudunhu reSouth Carolina. Ikoko tinogona kuwana taundi rakanzi York, inozivikanwa se "guta remuchena rose." Angori makiromita makumi mashanu kubva ipapo, akananga kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva uye pasina kusiya nyika, kune rimwe guta rine zita re Lancaster. Uye zita remadunhurirwa reguta iri, chokwadika, "iro guta reduva rose."
Chekupedzisira, isu tinogona zvakare kuwana iyo Tudor yakasimuka mu jasi remaoko eCanada, chisaririra chenguva yekoloni yeBritain yakatsungirira nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iyo Tudor yakasimuka, ruva reEngland ruva